Maitiro Ekutumirazve iyo Yakagadziridzwa kana Nyowani Robots.txt Faira | Martech Zone
Chishanu, April 29, 2016 China, April 28, 2016 Douglas Karr
Yedu agency inobata organic yekutsvaga kubvunza kune vanoverengeka SaaS vatengesi muindastiri. Mutengi uyo isu tichangotanga kushanda naye anga aita tsika yakajairika, achiisa kunyorera kwavo kune subdomain uye kutamisa yavo saiti bhurocha kune dura repakati. Aya maitiro akajairwa sezvo ichigonesa zvese rako rekugadzira timu uye yako yekushambadzira timu kugadzirisa izvo zvichidikanwa pasina chero kutsamira pane imwe.
Sekutanga nhanho yekuongorora kwavo kwehupenyu hwekutsvaga hutano, isu takanyoresa ese ari maviri mabhurocha uye ekushandisa madomaini muWebmasters. Ndipo patakaona nyaya iripo. Ese mapeji eapplication aive achivharwa kubva kunongedzwa neinjini dzekutsvaga. Isu takaenda kune avo marobhoti.txt kupinda muWebmasters uye pakarepo tikaziva nyaya.
Ndichiri kugadzirira kutama, timu yavo yekusimudzira haina kuda kuti iyo subdomain yekunyorera iverengerwe nekutsvaga, saka havana kubvumidza kupinda kune injini dzekutsvaga. Iwo marobhoti.txt faira iri faira rinowanikwa mune mudzi wesaiti yako - yourdomain.com/robots.txt - izvo zvinoita kuti injini yekutsvaga izive kuti kana vachikambaira saiti. Iwe unogona kunyora mitemo yekutendera kana kusabvumidza indexing pane iyo saiti yese kana chaiyo nzira. Iwe unogona zvakare kuwedzera mutsetse kutsanangura yako sitemap faira.
The Robots.txt faira raive neinotevera yekupinda iyo yaitadzisa iyo saiti kubva kukambaira uye kunongedzwa mune yekutsvaga mhedzisiro masosi:
Inofanirwa kunge yakanyorwa seinotevera:
Mushandisi-mumiriri: * Bvumira: /
Iyo yekupedzisira inopa mvumo kune chero injini yekutsvaga inokambaira saiti iyo yavanogona kuwana chero dhairekitori kana faira mukati saiti.
Hukuru… saka izvozvi izvo izvo Robots.txt faira rakakwana asi Google inoziva sei uye vanozoongorora nzvimbo yacho riini zvakare? Zvakanaka, unogona kukumbira zvachose kuti Google itarise marobhoti.txt, asi haina kunyatso nzwisisika.
Enda kune Google Search Console Tsvaga Console ku Kukambaira> robots.txt Tester. Iwe uchaona zvirimo mune ichangoburwa crawled robots.txt faira mukati meTester. Kana iwe uchida kuendesa futi yako robots.txt faira, tinya Tumira uye popup ichauya nesarudzo shoma.
Sarudzo yekupedzisira ndeye Kumbira Google kuti ivandudze. Dzvanya bhatani rebhuruu Tumira padyo nesarudzo iyoyo wobva wadzokera ku Kukambaira> robots.txt Tester menyu sarudzo yekudzosera iro peji. Iwe unofanirwa ikozvino kuona irinodzorerwa robots.txt faira pamwe chete nesitampu yemusi inoratidza kuti yakakwenenzverwa zvakare.
Kana iwe usingaone yakavandudzwa vhezheni, unogona kudzvanya pasi uye sarudza Wona yakadhindwa vhezheni kufamba kune yako chaiyo robots.txt faira. Masisitimu mazhinji acha cache iyi faira. Muchokwadi, IIS inogadzira iyi faira zvine simba zvinoenderana nemitemo yakapinda kuburikidza neyavo mushandisi interface. Iwe ungangodaro unofanirwa kugadzirisa mitemo uye kuzorodza cache kuti ubudise robots.txt faira nyowani.
Tags: google webmastersmarobhotiRobots.txtmarobhoti.txt fairaseoWebmaster